Dị mfe, onye Caveman nwere ike ime ya ... | Martech Zone
Dị mfe, onye Caveman nwere ike ime ya…
Tọzdee, Machị 8, 2007 Tuesday, October 4, 2011 Douglas Karr
Taa bụ ụbọchị ọgbakọ klọb ma anyị nwere ọ pleasureụ na - enweghị atụ nke isoro nzukọ ọgbakọ ekwentị Mikela na Philip Tarlow, ndị dere Ndị Aboriginal. Nke a bụ ihe Amazon kwuru:
Dijitalụ Aboriginal, nke Mikela Tarlow na Philip Tarlow dere, na-atụ aro ụzọ pụrụ iche pụrụ iche maka ndị na-achọ ụzọ ọhụụ iji nọrọ na gburugburu azụmaahịa azụmaahịa ọgbara ọhụrụ: ịlaghachi na "ụwa anwansi, netwọkụ, ụwa multidimensional" nke ndị Aborigine maka mmụọ nsọ na nduzi . Ndị ode akwụkwọ –ọ bụ ọkaibe na mmụta nhazi; ọ bụ onye mba ụwa ghọtara artist – kwere ihe ọmụma nke nomadic ụzọ nke desert meshes n'ụzọ zuru okè na oge a mkpa nke ebe ọrụ. N'akụkụ anọ nke na-eleba anya n'omume aboriginal na ọnọdụ nke oge dijitalụ, ha na-egosi otu ụzọ dị iche iche isi nwere ike isi jiri usoro na nka maara nke ọma.
Iji mee ka anyị mara ihe niile, agụbeghị m akwụkwọ ahụ ugbu a after Nke a bụ nhụchalụ nke ngalaba anọ:
Onye nwere Ifufe? nke a bu ihe omimi miri emi banyere ihe ọgụgụ isi na ikike nke anyi ihe. Ajụjụ a bụ ihe atụ ma na-arụtụ aka n'àgwà oge ochie nke "anyị" na àgwà nke oge a nke "m". Mikela na Philip kwenyere na usoro a amalitela ịlaghachi na 'anyị'… uche anyị maka udo, okpomoku ụwa, ọnọdụ ime mmụọ, imezi onwe ya, wdg.
Nloghachi nke ndị na-akọ akụkọ ọ bụrụ na ị bụbụ onye na - ede blọgụ ruo nwa oge, ị ga - ahụ na ụfọdụ blọọgụ kacha aga nke ọma na - akọ akụkọ. Kemgbe ọtụtụ puku afọ, ọ bụ otú ndị mmadụ si zụọ ibe ha. Ma ọ ka bụ usoro na-aga nke ọma. (N'ebe ọrụ m, anyị na - eji ihe eji eme ihe iji kọwaa ndị otu mmepe anyị otu ndị mmadụ ga - esi jiri ngwa anyị… anyị na - agwa akụkọ ahụ!)
Uche Agbụrụ nke a bụ maka oghere ịrụkọ ọrụ ọnụ na otu ndị mmadụ si achịkọta onwe ha iji nweta arụpụta ihe. Ngbanwe di egwu nke web bu ikike imekorita na ndi ichoghi, na emeputa ihe operating Systems, ngwa… Na ọbụna n'ịntanetị Encyclopedia.
Nya Abụm Abụ bụ mkparịta ụka banyere ikike anyị nwere ịgbaso mmụọ ebumpụta ụwa anyị. Mikela kwuru na Malcolm Gladwell mere nnukwu ọrụ nke ịkọwa nke a Blink: Ike nke iche echiche n'echeghị echiche. Na olu data anyị na-eche ihu taa, otu ga-enweta nyocha ahumkponwu. Trusttụkwasị obi anyị obi abụghị otu ihe na-eche eche - enwere ọtụtụ ihe na-egosi na enwere nghọta karịa ka anyị maara.
Mkparịta ụka ahụ na-akpali akpali. Onye ọ bụla nọ na klọb Book ji iwe na-ede ihe ma na-eripịa mkparịta ụka ahụ. Mikela na Philip na-arụ ọrụ na akwụkwọ ọzọ ha, The Nlaghachi nke Storytelling, nke ahụ ga-abanye nke ọma n’isiokwu ndị ha metụrụ na ya Ndị Aboriginal.
Nke a bụ ihe ịtụnanya gbasara Digital Aboriginal… edere ya n’afọ 2002! Dabere na ozi gbakọtara site na nyocha ha, Mikela na Philip metụrụ aka na nkà na ụzụ na ụlọ ọrụ ọhụrụ ndị na-adịbeghị. Ebe ọ bụ na edere ya afọ 5 gara aga, ị nwere ike zụta ya na Amazon maka $ 3.99.
N'ike mmụọ nsọ maka akwụkwọ a n'ezie, ọ bụ site n'ịhụ otu ihe osise ebe bọọdụ sekit dị ka ihe osise eserese oge ochie.
Mikela na Philip nwere obi ụtọ banyere mkparịta ụka ahụ dịka anyị nwere, ọ dị egwu. Anyị na-akpọ ụlọ nkwari akụ ha na Gris ka anyị kwurịta akwụkwọ ha, klọb akwụkwọ anyị, yana echiche anyị banyere etu azụmahịa na teknụzụ si agbanwe. Enwere m ike ịga n'ihu na - enwere m peeji nke 4 nke ederede site na nzukọ ekwentị 1 oge.
M ama rethinking ụfọdụ nke m ihe onwunwe m okwu ihu ọha na Corporate Blogging n'izu na-abịa inye ya ụfọdụ n'ime echiche ndị a na-akpali iche echiche.
Special ekele na-aga Harlon Wilson, Onye isi ala na onye isi oche nke Ahụike Ahụike. Harlon bụ enyi na Mikela na Philip wee hazie teleconference ahụ.
WordPress: Lelee ma Onye ọrụ abanyela
Triangle Blogging: Ihe 3 nke ofga nke Ọma